सियाँलमा | BLOGSTREET
Posted on May 12, 2010 by Roopess	सयौं सालहरुसम्म
उस्तैसँग ढुसी पलाएको
त्यो बुढो रुख
न बाढीले पखालिन्छ
न आँधीले लडाउँछ
न धूपले डढाउँछ ।
त्यो बुढो रुखका
खोस्टे पातहरु पन्छाउँदै
तुषका ढिक्काहरु नपलाउन्जेलसम्म
र हरेक साल
माटोमा विलय हुन्छन्
त्यो रुखको सियाँलमा ।
अर्को साल पनि
र त्यो साल
उही पुरानै जराका तन्तुहरुबाट
चियाउँदै पलाउँछन् उनीहरु
उसैगरि विलय हुन
This entry was posted in AsaPoet, In Nepali and tagged nepali, Poem. Bookmark the permalink.
5 responses to “सियाँलमा”	प्रवेश says:	May 14, 2010 at 2:24 AM	जता सोच्यो उतै मिल्ने कस्तो गज्जबको कविता दाइ…….
Reply	Milan Limboo says:	May 13, 2010 at 4:45 PM	सर तपाईको सृजना साच्चिकै राम्रो लागो मलाई । आगामी दिनहअरुमा पनि यस्तै यस्तै नयाँ सृजनाहरुको अपेक्षा गर्दछु ।
Reply	वसन्त says:	May 12, 2010 at 7:32 PM	जीर्ण रुखहरु ढलेकै राम्रो! तर त्यसको ठाऊँमा नयाँ यौवनयुक्त रुख भने चाहिन्छ हामीलाई, दूबोले मात्रै त पुग्दैन।
Reply	Samaya समय says:	May 12, 2010 at 5:05 PM	गज्जबकै रै’छ नि त त्यो बुढो रूख मित्र, सबथोक सकिँदा पनि उस्तै रहने!
Reply	Aakar says:	May 12, 2010 at 2:34 PM	सायद यही नै सबैको नियती को !!!